« Tsy nety tafiditra ny vetesiny ka nisafidy ny hanao dia mianoatra niverina nidina moramora ny mpamily ilay fiara. Diso nahazo sisin-dalana loatra anefa, ka nanitsy tany an-kady. Tsy nahatazona azy ny fefy bararata teo amin’io sisin-dalana io ka nivadibadika nianjera tany ambany tany ilay fiara », hoy i Misivavy Jeanette, mpivarotra sakafo masaka eo akaikin’io toerana io.
« Ny mpamily irery no tao anatin’ity fiara ary teo amin’ny tarehiny no misy naratra. Nisy lehilahy iray sendra nandalo voafaokany ka naratra koa », hoy ity vavolombelona ity. Dimy metatra sisa ny elanelana tsy nifatraran’ilay fiara tamin’ny tafon-tranon’ny olona monina eo ambanin’ilay toerana nianjeran’ilay fiara.
« niezaka nanarina ilay fiara sy nanapaka ny herinaratra taminy avy hatrany izahay sao sanatria mipaoka na mirehitra », hoy ny mpamonjy voina tonga teny an-toerana.